Hampitomboina ao aminareo hatrany anie, ry havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy i Jesoa Kristy Tompontsika.
Amin’izao Alahadin’ny Baiboly izao ry havana, dia manan-kambara amintsika indray ny Tompo. Aoka hivelatra eo anoloanareo ary ny Salamo 119:97-104 izay handraisantsika ny hafatra avy amin’ny Tompo anio. Ety am-piandohana ry havana, dia te hilaza aminao aho fa manova olona ny Tenin’Andriamanitra. Maty antoka isika ry havako, raha mandre ny Tenin’Andriamanitra mandrakariva nefa tsy mandray fanovana avy amin’izany. Anio, manontany anao ny Tompo hoe: “Tianao ve ny hovan’ny Tenin’Andriamanitra?’
I SAINTSAINO MANDRAKARIVA NY TENIN’ANDRIAMANITRA
Hoy ny and 1: “ fisaintsainako mandrakariva izany”
Ny hoe misaintsaina ny Tenin’Andriamanitra , ry havana, dia mieritreritra lalina dia lalina, mamela ny Tenin’Andriamanitra hanenika ny fo sy ny saina mihitsy. Tsy izany ihany fa mianatra sy mandinika isan’andro ny Tenin’Andriamanitra mihitsy.. I Jesoa Kristy dia nilaza hoe : “ dinihinareo ny Soratra Masina” ao amin’ny Jaona 5:39. Manana firy minitra ianao isan’andro mba handinihina ny Soratra Masina?
Ny mpanao Salamo eto dia maneho ny fitiavany ny Tenin’Andriamanitra amin’ny fisaintsainana izany. Tsy maintsy entanin’ny fitiavana maherin’Andriamanitra nefa isika, ry havana, ka ny Fanahy Masina mihitsy no mampirehitra izany fitiavan’Andriamanitra izany eo am-pandinihina ny Soratra Masina.
Ny vokatry ny fisaintsainana ny Tenin’Andriamanitra ry havana, araka ny hitantsika eto amin’ny and 98 sy 99 dia fahendrena. Izany hoe lasa manana fahazavan-tsaina sy fahalalana ny olona tia mandinika ny Tenin’Andriamanitra. Afaka manamarina ny karazam-pampianarana misy, ka tsy voafitaka na voahonzongozona amin’ny finoany. Lasa manana saina mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy izy ary afaka mamanta-javatra. Rehefa tsy mandinika ny Tenin’Andriamanitra ny olona dia ny tsara indray no heverina ho ratsy ary ny ratsy ho tsara. Ohatra: izay tsy manao kolikoly dia toy bado, toa mahamenatra izany atao hoe masina be izany.
II TANDREMO NY TENIN’ANDRIAMANITRA
Hoy ny and 100: “ny didinao no notandremako”
Ny fitandremana ny Tenin’Andriamanitra ry havana, dia tsy afa-misaraka amin’ny famakiana izany ihany koa. Isika mpandray ny Fanasan’ny Tompo dia efa samy nanao fanekena ny hamaky Baiboly isan’andro avokoa.
Rehefa vakintsika ny Soratra Masina dia mamaky antsika ihany koa izy. Ny Apostoly Jakoba ( Jakoba 1:22-24) manko dia nanohitra izany amin’ny fitaratra izay ahafahana mijery ny tena. Izany hoe: rehefa vakin’ny Tenin’Andrimanitra ianao ka asehony miharihary eo ny tsy mety ao aminao dia mitaona anao hiova izay, ary izay ilay fankatoavana na fitandremana ny Tenin’Andriamanitra. Ny fanekenao hovakin’ny Tenin’Andriamanitra dia mahatonga ny zavatra mifangaro any anatin’ny saina sy ny fo ary ny fanahy hiavaka sy hisaraka tsara. Ny matoanteny azo amin’io teny hoe “Hendry” ao amin’ny and 100 io mantsy, amin’ny teny Hebreo izay nanoratana ny Testamenta Taloha, dia “mampisaraka”, tahaka izay hita ao amin’ny Gen 1, ary ao amin’ny Heb 4:12 ihany koa dia misy ilay teny hoe “fampisarahana”. Mampisaraka antsika amin’ny fahotana ny Tenin’Andriamanitra tahaka ny ambaran’ny mpanao Salamo eto: “…izany no hankahalako ny lalam-pitaka rehetra” (and 104), ary koa:”efa narovako ny tongotro tsy ho amin’ny lalan-dratsy.” (and 101)
Eto am-pamaranana, diniho sy ankatoavy isan’andro ry havana ny Tenin’Andriamanitra fa hanome fahendrena ho anao ary hanadio anao sy hanome fahazavan-tsaina ho anao izany. Fa raha manao izany ianao, dia hanova anao tokoa ny Tenin’Andriamanitra mba hiorenanao tsara ao amin’I Jesoa, ilay Teny tonga nofo!
Ho an’Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra! Amen.